लुभुमा सईको आफ्नै धन्दा
काठमाडौं, ७ जेठ । यातायतको सिन्डिकेटदेखि सुन तस्करीको पत्र पत्र केलाएर लोकप्रियता कमाएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको साख प्रहरी सरुवामा आएर नराम्रोसँग गिरेको छ ।
२०७५ वैशाख ४ मा गरेको १६ डीआईजीको पदस्थापन र ४ को सरुवामा कमाण्ड कन्ट्रोल गर्नेहरुभन्दा पनि एसम्यानलाई महत्वपूणृ स्थान दिएको आरोप गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालमाथि लागेको छ ।
वित्तीय अपराधलगायतका ठूला र संगीन अपराध अनुसन्धान गरी नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठा उँचो बनाउने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा कमाण्ड नै गर्न नसक्ने डीआईजी नारायण खड्कालाई पठाइएको छ ।
हेमन्त मल्ल ठकुरी, नवराज सिलवाल र पुस्कर कार्की जस्ता काविल प्रहरी अधिकृतहरुले नेतृत्व गरेको ब्युरोले अहिलेसम्म ठूला अपराधका घटनामा सफल अनुसन्धान गरी प्रहरीको छवि उजिल्याउने काम गरेका थिए । ब्युरोमा त्यो बिरासतलाई कायम राख्न सक्ने योग्य डीआईजीहरुलाई जिम्मेवारी नदिई गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालले कार्यक्षमता कमजोर भएका खड्कालाई पठाएका छन् ।
आईजीपी खनालले आफूसँग बसेकै आधारमा खड्कालाई ब्युरो जस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण निकायको जिम्मेवारी दिएको आरोप छ ।
ब्युरो स्थापनादेखि अहिलेसम्म सबैले उत्कृष्ट काम गर्दैआएको रेकर्ड आईजीपी खनाललाई थाहा छैन भनेर कसरी भन्ने, हेडक्वार्टरमा चर्चा चल्ने गरेको छ ।
नारायणी अञ्चल प्रहरी प्रमुख हुँदादेखि जुनसुकै निकायमा बस्दा पनि अनेक विवादमा मुछिएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका ज्वाइँ नाता पर्ने मनोज न्यौपानेलाई महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएकोमा पनि प्रहरी संगठनभित्र असन्तोष छाएको छ ।
पूर्व एआईजी केशरी घिमिरेले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट गराएपछि उनकै दबाबमा न्यौपाने सरुवा भएको चर्चा छ । आयुक्त कार्यालयमा वरिष्ठ डीआईजी पुस्कर कार्कीलाई पठाएको भए राम्रो सन्देश जाने थियो । तर, यसमा गृहमन्त्री थापा चुकेको चर्चा गृहमा पनि सुरु भएको छ ।
वरिष्ठ डीआईजी कार्कीलाई एकेडेमीमा थन्क्याइएको छ । आईजीपी खनालले विगतकै आईजीपी जस्तो आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई एकेडेमीमा थन्क्याएको आरोप लागेको छ । जबकि कार्कीले आफू आईजी नभएपछि खनाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
एआईजी बढुवा हुन नसकेका कारण न्यौपानेलाई आयुक्त कार्यालयको निमित्त प्रमुखमा पठाइएको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर अनि बद्नाम डीआईजी दिनेश अमात्य २ नम्बर प्रदेशको प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ ।
टनका टन सुन तस्करी हुने नाका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुखमा कमलबहादुर जीटीलाई पठाइएको छ । प्रहरी अधिकृतमा जीटी पनि कार्यक्षमता कमजोर मध्येमा पर्दछन् ।
काठमाडौं ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल छ । तर, ट्राफिकमा राम्रो डीआईजी पठाउनुपर्नेमा एसएसपी बसन्त पन्तलाई सरुवा गरिएको छ । यी महत्वपूर्ण निकायका प्रहरी हाकिमहरुको सरुवा आईजीपीको आफूखुसी हो कि केही काम गरेर देखाउने आँट गर्दै आएका गृहमन्त्री बादलको हो ?
दोधारमा परियो, यो सरुवाले गृहमन्त्रीले लिएको लक्ष र खोजेको रिजल्ट आउनेमा आशंका छ भन्छन्, प्रहरी अधिकृतहरु । आईजीपी खनालले आफ्नो टिम नै कमजोर बनाएको चर्चा पनि सुरु भएको छ । मोरङदेखि जहाँ बस्दा पनि विवादमा परेका तारणी लम्साललाई आईजीपी खनालले आफ्नो समूहकै भएका कारण संघीय इकाई प्रहरी कार्यालय नारायणीको प्रमुख बनाएको आरोप छ ।
सिन्धुपाल्चोक, मोरङमा विवादमा परेका, काभ्रेमा गणेश लामासँग मिलेर सुनकोशी दोहन गर्न छुट दिएर लाभ लिएको आरोप खेप्दै आएका नवनियुक्त एसएसपी सहकुलबहादुर थापालाई सचिवालयमा लगेका छन् । थापालाई सम्भवतः उजुरी छानविनको जिम्मा दिने योजनामा आईजीपी खनाल रहेको चर्चा छ ।
थापाविरुद्ध अख्तियारमा थुप्रै उजुरी छानबिनको क्रममा रहेको पनि चर्चा छ । विगतमा संघीय इकाई प्रहरी का र्यालय बागमतीमा क्रसर व्यवसायीसँग मिलेर प्राकृतिक विनाश गरेका दर्जनौं उजुरी परेका थिए, तिनै प्रहरी अधिकृत थापालाई उजुरी छानविनको जिम्मा दिने तयारी आईजीपी खनालले गरेकोमा आलोचना भएको छ ।
यी जर्नेललाई प्रधानसेनापति बन्ने रहर
नेपाली सेनाका उपरथी अनुज बस्नेत अंग्रेजीमा स्टाफ कलेजको जाँच दिन नसक्ने भएपछि नेपालीमा स्टाफ कलेज पास गरेर पूर्व महारथीहरुको चाकडी कै भरमा अवकाशको मुखमा पुगिसक्दा पनि राजनीतिक शक्तिको बलमा ब्यूँतिएर हाल उपरथीमा कार्यरत छन् ।
उनी भावी योजना बनाउन र विगतका असन्तुष्ट व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गरी योजना कार्यान्वयन गर्न लगाईरहेको हामीले सुनेका छौं । यी जर्सा’ब कहिले नगरकोटको होटलतिर गोप्य र कहिले धुलिखेलमा गई रातभरि योजना बनाउँछन रे ।
आर्मीको नीति तथा योजना बनाउनका लागि त क्षमतावान पनि हुनुपर्ने हो । तर, यी जर्सा’ब हरेक काम चाकडी, चाप्लुसी गरेकै भरमा सफल हुन चाहन्छन् र त्यसैको खेतीमा लागिरहन्छन् भन्ने हामीले सुनेका छौं । यिनका लागि थिंकट्यांक मानिएका छन्, प्रधानसेनापतिको सपना देख्दादेख्दै अवकाशमा परेका जर्नेल विनोद बस्नेत ।
जर्नेल विनोद बस्नेतलगायतको ब्याकअप गर्दैछन् रे भन्ने पनि सुनेका छौं । अब सबै थोक छाडेर सबै जना अनुजलाई चिफ बनाउनुपर्छ भन्दै नेपाल प्रहरी हाकिमहरुको शैली अपनाउँदैछन् भन्ने सुकेका छौं ।
विगतमा रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानकी श्रीमती र अनुज बस्नेतको रानी साहेव क्लास मेट भएको नाता जोड्दै विशेष व्यवस्था गरेपछि अनुज बस्नेतको पदावधिको म्याद दुई दिन बराबरमा थपिएर आयो । आर्मी हेडक्वार्टरमा सबै चकित परे ।
जसले गर्दा यो पटक पनि विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि हालका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई प्रभावमा पार्ने र आफू प्रधानसेनापति बन्ने सपना बोकेर हिडेका छन् रे । यसरी राजनीतिक शक्तिलाई अनेक तरिका अपनाएर प्रयोग गरी म्याद थप्ने जर्सा’ब के कारबाही हुन्छ त ?
कुनै राजनीतिक नेताले स सानो दर्जाको अधिकृतहरुलाई मर्का परेको समस्या राखेर सरुवा गर्न अनुरोध गर्दा डोसियरमा लेखिदिने सैनिक सचिव सहायक रथी खड्का मल्ललाई सोध्न चाहन्छौं कि अनुज बस्नेतको डोसियरमा राजनीतिक पावर लगाई दबाब दिएको भनेर लेखिएको छ कि छैन ?
हाल अनुज बस्नेत चुपचाप देखिन्छन् र नेतृत्वले खासै ख्याल गरेको पाइँदैन । तर, यिनी भित्रभित्रै नेतृत्वको बद्नाम गरी आफू प्रधानसेनापति बन्न दुनो सोझाईरहेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा आफू सेनापति बन्न सक्ने सम्भावनाहरु बताउँदै हिँडेको हामीले नै भेटेका छौं ।
सेनामा राजनीतिक प्रभाव नगर्न पहिला जर्नेल अनुजलाई कारबाही गरियोस् अनि मात्र स साना दर्जाका अधिकृतहरुले आँट गर्दैनन् । जर्नेल अनुजले जे गरे पनि हुने र अन्यलाई चाहिँ कारबाही गर्ने छुट कसरी भयो सैनिक सविचज्यू ?
लुभुका यी सई काममा भन्दा अन्तै रमाउछ् !
महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर अन्तर्गत प्रहरी प्रभाग लुभुमा अहिले सई भीमबहादुर श्रेष्ठ कार्यरत छन् । बागलुङ घर भएका उनको विगत हेर्ने हो भने परिसर ललिपतुरका पुराना प्रहरी कर्मचारीहरु र तिनको विगत साक्षी छ ।
विगतदेखि नै विवादित यी सई सोर्सफोर्स भिडाएर एक दशकभन्दा बढी ललिपतुर क्षेत्रमा जमेर बसेका छन् । लामो समयमा प्रशासन फाटु र सुवेदार मेजर बस्दा तल्लो दर्जाको प्रहरी कर्मचारीहरुलाई बिदा आउट छोड्दा नगद, जिन्सी र रिचार्ज लिँदै आएकोमा पछि उजुरी परि पुष्टि भएर कारबाही भई विगतका हाकिमले ललितपुर जिल्लाबाट लखटे पनि बिगत दुई वर्ष अगाडि महानगरीय प्रहरी वृत्त चापागाउँ दरबन्दी बनाई ललितपुर मै कार्यरत थिए र अहिलेका हाकिम गणेश ब.ऐरको चाकडी गरी निज चापागाउँबाट परिसर आई सुबेदार मेजर बन्न सफल भएका छन् ।
सई भीमबहादुर श्रेष्ठको नानीदेखि नै लागेको बानीलाई निरन्तरता दिई पुरस्कार समेत आफ्नै नाममा पार्न सफल भएका थिए । हाल परिसरका हाकिमहरुलाई काम र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा खुसी पारेर लुभु ईन्चार्ज जान सफल भएका छन् ।
लुभु क्षेत्रमा सई भीमबहादुर श्रेष्ठले महिनावारी र हप्तावारी उठाएर हैरान बनाएको गुनासो सुनिन थालेको छ । सई भीमबहादुर श्रेष्ठलाई खुसी पारेपछि जुवा र तासलाई खुल्ला गरेको गुनासो ललितपुरका प्रहरीहरुले गरेका छन् ।
परिसरमा सई भीमबहादुर श्रेष्ठभन्दा काबिल जुनियर प्रहरी अफिसर हुँदाहुँदै त्यस्तो विवादित सईलाई ईन्चार्ज पठाउनुको रहस्य के हो भन्ने चर्चा हामी प्रहरीबीच हुने गरेको छ । स्मरणीय छ निज सई ललितपुर बाहेक अन्य जिल्लामा गए जागिर खान नसक्ने र राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने निज स्वयमले सहपाठीहरुलाई बताउँदै आएका छन् ।
प्रहरी जागिर फलिफाप भएर आफ्नो बन्दोबस्ती गरिसकेका सई भीमबहादुर श्रेष्ठलाई धनाढ्य सई भनेर उनका समकक्षीहरु टिप्पणी गर्ने गर्दछन् । कार्यालय पोशाकमा कहिले नबस्ने तर बाहि र आम्दानीको स्रोत खोज्ने कार्यमा बढी ध्यान दिई शान्ति सुरक्षाभन्दा व्यापक व्यवसायमा रमाएका छन्, साँघुमा उल्लेख छ ।
मानभवनको प्रतिष्ठीत कलेज अगाडि श्रीमतीको नाममा ठूलो स्टेसनरी पसल खोली परिसरमा हुँदा संधै आफै र अहिले लुभु हुँदा पनि शान्तिसुरक्षामा व्यस्त रहनेभन्दा बढी पसलतिर रमाउने गरेका छन् ।
निजको गैरव्यवसायिक क्रियाकलापको छानविन होस् माग गर्दछौं ।
मालअड्डामा बद्नामहरुको सरुवा, विवादित एसपीलाई जिल्लाको जिम्मेवारी ,काठमाडौंमा घुस काण्ड